बिग बास लिगः आरोन फिन्चले बनाए शानदार शतक – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौंः अष्ट्रेलियामा जारी बिग बास लिग (बीबीएल) अन्तर्गत सिड्नी सिक्सर्स विरुद्धको खेलमा मेलबर्न रेनेगेड्सका कप्तान आरोन फिन्चले शतक पूरा गरेका छन् । उनले ६३ बलमा ६ छक्का र ६ चौका प्रहार गर्दै शतक बनाएका हुन् ।
जारी बीबीएल सिजनमा शतक बनाउने फिन्च तेस्रो खेलाडी बनेका छन् । यो सिजनमा होबार्ट हरिकेन्सका डार्सी सट र मेलबर्न स्टार्सका मार्कस स्टोइनिसले पनि शतक बनाइसकेका छन् ।
फिन्चकै शतकमा रेनेगेड्सले सिक्सर्सलाई १ सय ७६ रनको बलियो लक्ष्य दिएको छ । रेनेगेड्सका लागि कप्तान फिन्चले १०९, टम कपूरले २४, मोहम्मद नाबीले २० रन बनाए । बलिङमा सिक्सर्सका टम कुरानले सर्बाधिक ३ विकेट लिए ।
जारी सिजनमा फिन्चको यो तेस्रो अर्धशतक हो । गत सिजनमा उपाधि जितेको उसले यो संस्करणमा भने निकै खराब खेल्यो । रेनेगेड्सले १२ म्याच खेल्दा २ खेलमा मात्र जित हासिल गरेको छ ।
१४ औँ म्याच खेल्दै आज मेलबर्न स्टार्स
बीबीएल अन्तर्गत मेलबर्न स्टार्सले आज आफ्नो १४ औँ म्याच खेल्दै छ । उसले १४ औँ म्याच क्रिस लिन नेतृत्वको ब्रिसबेन हिटविरुद्ध खेल्न लागेको हो । मेलबर्न र ब्रिसबेनबीचको खेल दिउँसो १ः५५ बजेदेखि सुरु हुनेछ । ‘प्लेअफ’मा स्थान बनाउन ब्रिसबेनलाई आजको खेल जित्नैपर्ने दबाब छ । मेलबर्न यसअघि नै ‘प्लेअफ’मा पुगिसकेको छ । उसले १३ म्याच खेल्दा २० अंक जोडेको छ ।
जारी बीबीएलमा मेलबर्नले १३ खेलमा ३ म्याचमा मात्र हारको सामना गर्नु परेको छ । नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित मेलबर्नले २ पटक एडिलेड स्टाइकर्स र एकपटक सिड्नी सिक्सर्सविरुद्ध मात्र हार बेहोरेको छ ।
आजको खेलमा पनि प्लेइङ ११ मा अटाउने सन्दीपको सम्भावना बलियो छ । उनी मेलबर्नले शुक्रबार घोषणा गरेको १३ सदस्यीय टोलीमा पनि अटाइसकेका छन् । ब्रिसबेनविरुद्ध सन्दीपसहित २ विदेशी बलरले मौका पाउने सम्भावना छ । मेलबर्नको चौथौं म्याचदेखि पाकिस्तानका फास्ट बलर दिलदार हुसेन जोडिएका छन् । उनी पाकिस्तानी अर्का तिव्र गतिका बलर हरिस रौफको स्थानमा टीममा जोडिएका हुन् । जारी प्रतियोगितामा सन्दीपले १२ म्याच खेल्दा १४ विकेट लिएका छन् ।
ब्रिसबेन विरुद्धको म्याचका लागि मेलबर्नको टोलीः ग्लेन म्याक्सवेल (कप्तान), नाथन कल्टर नाइल, बेन डंक सेब कोच, पीटर ह्यान्ड्सकम्ब, क्लिन्ट हिन्चलिफ, दिलबर हुसेन, सन्दीप लामिछाने, निक लार्किन, निक म्याडिन्सन, मार्कस स्टोइनिस, डानियल वर्रल र एडम जम्पा ।
ट्याग्स: आरोन फिन्च, बिग बास लिग, शतक, सिड्नी सिक्सर्सविरुद्ध मेलबर्न स्टार्स
सञ्चारमन्त्रीले दुबै अध्यक्षसँग छलफलपछि राजीनामाको निर्णय गर्ने, पत्रकार सम्मेलन ४.३० मा
त्रिभुवन विमानस्थलमा ‘पर्यटन परि’ रोर्बट, के गर्छ काम ?
सञ्चारमन्त्रीमाथि राजीनामा दिन चर्काे दबाब, आज ३ बजे पत्रकार सम्मेलन
सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पदमुक्त गर्न माग
सुनको मूल्यले आज पनि बनायो कीर्तिमान, चाँदीको भाऊ पनि निरन्तर बढ्दै
‘मन्दिरमा चढाइएकी देवी’ का ५ सन्तान, तर बाबुको ठेगान छैन!
अनियमियता गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री महासेठविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी